Ukubhuka Iphakheji Lokuvakasha Lonavala Khandala | | Shayela ku: + 91-993.702.7574
Laphavala Khandala Tour Package
I-Lonavala isiteshi sezintaba okuthiwa yi-jewel yamaSaidadri Mountains eduze ne-Mumbai e-Maharashtra. I-Lonavala Khandala Tour Package ikunika ithuba lokuzwa into enhle kakhulu futhi enhle, ethwele isikhwama esigcwele izinkumbulo. Inqwaba yemvelo ngesimo samanzi, izihlahla kanye nezigodi, amahlumela ashisayo, amachibi kanye nemifula yasendulo kwenza iLonavala mini ipharadesi futhi ifike endaweni ephelele kude nokuhlala komuzi wendawo. Lolu hambo luzokuthatha ezindaweni ezisezindaweni eziluhlaza okwesibhakabhaka, imibono nemibhoshongo ehlanganiswa nemvelo yonke indawo. Lonavala uya ekuphileni ngesikhathi isizini sezulu njengoba emaphandleni aphenduka uhlaza oluhlaza okwesibhakabhaka nemifula kanye namachibi. I-Lonavala Khandala Tour Package iklanyelwe abantu abafuna ukuchitha isikhathi esithile endaweni enhle ye-ghats entshonalanga. Ama-ghats kanye nezigodi zaseLonavala neKhandala zihle kakhulu futhi zihlelekile ezingahle zenze isimangaliso sakho sokuhamba ngokumangalisayo. I-Lonavala Khandala Tour Package inikeza ukuphepha okuphelele endaweni ephumuzayo lapho umuntu angase abe nesikhathi esihle kakhulu sempilo yakhe. Iziteshi zezintaba e Khandala zibone ukuphakama nokuwa kwemibuso eminingi efana neMarathas, Peshwas kanye namandla angama-colonial emazweni aseYurophu. I-Sand Pebbles Tour N Travel ihlinzeka nge-10% isaphulelo ngesikhathi se-Independence Day. Sinikeza i-Packaging Tour yeLonavala Khandala ethokozisayo efanelekayo emibhangqwaneni, abangane noma emndenini.
Ngokuvakasha kwethu, ungaba nohambo lweholidini lokuphila kwakho olwake waphupha ngalo. Siyaqiniseka ukuthi uzoba nesipiliyoni esihle seholide ngezinkumbulo zokuphila kwakho konke.
Uhambo oluya eLonavala - Khandala
Ikhodi Yokuvakasha: 245
Ama-03 Nights / Izinsuku ze-04
Lapho efika e-Mumbai sezindiza / esiteshini sesitimela, thatha futhi uthumele eLonavala. Lapho ufika, ngena ngemvume ehhotela. ULonavala uye waba udumo ngenxa yesipho semvelo afana nalokhu: izigodi, amagquma, izimpophoma ezinamandla, ama-green and wind cool. Lesi sifunda sigcwele ubuhle bemvelo. I-Lonavala iyinkondlo enkulu eyadalwa nguNkulunkulu. I-Sun ekuseni ekhuphuka phezulu lapha ibonakala sengathi ukufafaza kwaphuma amanzi yonke. Izinyoni ezinwabuzelayo ngokuzithoba zivusa futhi konke lokhu kwenza kube kuhle kakhulu ekuseni. Sebenzisa lonke usuku lokuzilibazisa noma ungakhetha ukuhlola izimakethe zendawo ukuze ujabulele ukudla okumnandi kweLonavala. Ukulala ebusuku kuLonavala.
Namuhla, uzoqhubeka nokuvakashela iBhushi Dam, okuyinto indawo edume kakhulu edolobheni lonke. Liyindawo ephelele yabadlali be-picnickers. Kukhona imvula ephawulekayo, eduze nedamu, futhi iyindawo eyaziwayo kakhulu. Bese uvakashela i-Ryewood Park, ebuye itholakale emakethe yaseLonavala futhi inikeza umbono omuhle. Izitshani zitholakala kahle kakhulu, futhi uzothola izihlahla ezihlukahlukene nezimbali ezimibalabala. Kamuva uvakashele i-Tungarli Lake, indawo yokufakelwa eLonavala kanye nomthombo omkhulu wamanzi eLonavala. Usuku olusele lukhululekile futhi kamuva uthatha umhlalaphansi ebusuku eLonavala.
Ukudla kwasekuseni ehhotela. Ngemuva kokudla kwasekuseni vakashela Khandala (imizuzu engu-15 kms / 30). Ngokufaka izindawo zokubheka njenge: Karla Caves, Visapur Fort, Idamu laseWalwan. Finyelela ku-Khandala futhi ujabulele imibono evela kulezo zindawo ezihle esimweni esihle sezulu. Buyela ehhotela ukuze uhlale ebusuku eLonavala.
DAY 04: LONAVALA- MUMBAI (DEPARTURE)
Thumela ukudla kwasekuseni, hlola ehhotela. Shayela ku-Mumbai ukuze ubuyele ekhaya ngesitimela noma indiza.